Waxaa jira sababo dhawr ah oo ka mid ah wareejinta content in ay drive dibadda u adag, oo aan u Lugood sida warbaahinta kaydinta labadaba waxaa loo arkaa inay state of farshaxanka. Marka ay timaado in drive dibadda adag qofka uu amarka buuxa oo gacanta ku heeso kala duwan oo warbaahinta ah oo uu soo kaydiyaa u badan. Qaar ka mid ah dadka isticmaala fiirsan drive dibadda adag aadka u halista ah iyo sabab la mid ah waxaa ka mid ah aragtida ah in technology daruur ama adeeg online oo kale ah ee Lugood waa meesha ugu nabdoon si loo hubiyo in warbaahinta ay sii nabad iyo xasilooni. Dhinaca kale Lugood leeyihiin cadaadiska qaar sabab t oo dadka isticmaala ku fududa in ay u gudbiyaan files music inay dibadda HD. In tutorial this jidka soo degida music ka drive dibadda adag tahay in Lugood looga wadahadli doono lagu waxa ay sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in dadka isticmaala ay ogyahay nidaamka sida sawirada la xiriira ayaa sidoo kale lagu dari doonaa arrintan la xiriira noqday.
Part1: Jidka Free of wareejinta music ka drive dibadda adag
Part3: faa'iidada iyo khasaaraha
Part1: Jidka Free ah ka drive dibadda adag wareejinta music
Qof walba jecel yahay oo lacag la'aan ah oo halkan ka barta hore ee qodobkan waa in la hubiyo in Lugood waxaa laga keeno si computer ee Jid degdeg ah, hufan, wax ku ool ah oo wax kasta ka sarreeya oo lacag la'aan ah. Inta badan dadka isticmaala ay ka heli doonaa mawduuc this geedi socodka sida adag gacanta ah oo aad u caawiyay marnaba loo baahan yahay iyo user inay hubiyaan in iyadoo la kaashanayo qasabno yar warbaahinta Lugood ee folder waxaa laga soo wareejiyay drive dibadda adag tahay in computer ka dhigi karaa. Si aad u hesho sida ugu fiican ee user ay u baahan tahay in la hubiyo in talaabooyinka hoos ku xusan la raacay si la mid ah iyada oo aan gefo wax:
i. Drive The adag dibadda ka kooban warbaahinta Lugood ee folder waa in lagu lifaaqo kombiyuutarka:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay si loo bilaabo barnaamijka software Lugood taas oo muujinaysa interface soo socda:
iii. On PC drive adag waxa uu ku yaalaa desktop> aan computer iyo Mac drive dibadda adag lagu arki karaa desktop-ka. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in drive la furay si aad u eegto warbaahinta Lugood ee folder ka dibna gal ay si toos ah ay u soo jiiday folder music ee Lugood ah si ay u dhammaystiraan geedi socodka ee buuxa:
iv. By la isticmaalayo hab fudud user inay hubiyaan in waxyaabaha ku jira waa la soo guuriyeen in Lugood software oo lacag la'aan ah ka dhigi kara. Waxaa kale oo lagu talinayaa in la hubiyo in Lugood ay xiran yihiin iyo dib u bilaabay in ay hubiyaan in cusub ee warbaahinta Lugood folder saxanka barnaamijka software si aad u hesho dhammaan waxa ku jira u galay oo markaas laga daawan karaa in ay leeg- la mid ah oo warbaahinta folder content lagu jiiday. By la isticmaalayo habkan ma aha oo kaliya music laakiin dhammaan qaybaha kuwaas oo ay taageerayaan Lugood ee lagu jiido karo barnaamijka iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Qaybta 2.How si ay u gudbiyaan Music ka External Hard Drive in Lugood leh TunesGo si fudud
TunesGo haddana mar kale waa ciyaaryahan cajiib ah oo ay Wondershare in ay ururinta cabsi badan barnaamijyada software. Waxa kaliya ma ahan maamushaa files iyo fayl user marka ay timaado Lugood, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in ugu fiican loo sameeyaa si ku saabsan dhammaan arrimaha la xiriira Lugood. Laga soo bilaabo heesahaaga Intaa waxaa dheer warbaahinta dibadda ka maqan TunesGo ah waxaa uu u suuragelinayaa user si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah arrinta wax walba oo arrintan la xiriira oo aan marnaba ka tago user oo keliya. Waxaa jira tobanaan kun oo muuqaalada barnaamij software in la halkan hadli karaa laakiin in la xuso dhowr socda waa sharaxaad gaaban oo dhan oo iyaga ka mid:
Waxaa hayaa xogta ee user aad u gaarka ah sida aan haysan internet waxaa loo baahan yahay in ay sii wadaan barnaamij software iyo offline kala iibsiga waa sidaas daraaddeed suurto gal ah.
Software ayaa sidoo kale la siiyaa mudo tijaabo ah oo waa faa'ido, taas oo inta badan u tartameen aan siinaya in dadka isticmaala ay.
TunesGo ayaa interface cabsi badan oo halkan waxa loo isticmaali karaa ujeeddooyin kale oo kala duwan iyo sidoo kale.
The horumarinta ee Wondershare yihiin aad u adag ka shaqeeya si loo hubiyo in qoraalkii cusub ee barnaamijka waxa lagu bilaabay dib u dhac kasta oo dheeraad ah oo aan.
Sida barnaamijka waa badan loo waxaa loo isticmaali karaa dhowr ujeeddo kale sida xogta si iPad, iPod iyo iPhone ee model wax wareejinta sida ay taageerto oo dhan iDevices.
Si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo ka dib waa hab in user u baahan yahay in la raaco arrintan la xiriira si aad u hesho natiijooyinka sida baahida, doonayo iyo shuruudaha:
i. Barnaamijku waa in la soo bixi http://www.wondershare.com/tunesgo/ sida version ugu dambeeyay ee had iyo jeer laga heli karaa Wondershare website-ka rasmiga ah. Marka file exe ayaa lagala soo bixi user u baahan yahay in ay u maamulaan si interface ugu weyn ee u muuqataa,
ii. Marka la sameeyo user markaas u baahan yahay in ay ku xidhmaan drive dibadda adag tahay in kombiyuutarka:
iii. Barnaamijkan caqli iyo feejigan ayaa button add ah dusheeda adigoo riixaya oo user awood u yeelan doonaan in ay soo dhoofsadaan warbaahinta oo dhan ku wadid dibadda in ay kombiyuutarka:
iv. By gujinaya ikhtiyaarka ah "dejinta Smart in Lugood barnaamijka hubso in ka dhigi doonaa in heesaha oo dhan in ay ahayd in barnaamijka software-ka ie Lugood hor wareejiyo Lugood mar kale iyo inta kale oo dhan ka hadhay sida ay yihiin iyo waxa ay sidoo kale ku dhameysan doona hanaanka gebi ahaanba sida lagu muujiyey jaantuskan hoos ku qoran:
Qaybta 3.Pros iyo khasaaraha & Gunaanad
Kala iibsiga iyada oo barnaamijka software this waa dhammaystiran cajiib ah oo fudud badan abid
User cusub oo laga yaabaa in ay adag tahay sida tiro badan oo qasabno ku lug leh arrintan la xiriira.
Software waa 100% khatar iyo baadi lacag la'aan ah; Dhab ahaantii ay hagaajiya khaladaad ah oo user a wajahaya halka wareejinta raalli / ka Lugood.
Kala beddelashada content in Lugood noqon kartaa duulaan gaar ahaan haddii qofka la isticmaalayo barnaamijka markii ugu horeysay laakiin iyadoo la isticmaalayo TunesGo waa ma aha oo kaliya fudud laakiin user ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira. Helitaanka ugu wanaagsan ee reer geeddi ayaa suuragal ah keliya haddii qalabka xaq u jiraan si ay u taageeraan oo TunesGo waa mid ka mid ah. Waxaa sidoo kale ku taliyey in dhammaan dadka isticmaala in ay marka hore isku day dalab kooban wakhtigaas waa lacag la'aan bay u tahay qof walba oo ka dibna horay u iibsato barnaamijka oo aan aad u hubiso in ahay.
> Resource > Lugood > Music Transfer ka External Hard Drive in Lugood